Amiirka Khalaafada Islaamiga ah oo soo diray cajal cod ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 15 May 2015 15 May 2015
Mareeg.com: Khalaafada Islaamiga ah ama Daacish ayaa sii daysay cod ay ku sheegtay in uu duubay hogaamiyaha kooxdaasi, Abubakar Al-baqdaadi.
Ma ay jirto cid madaxbanaan oo xaqiijisay in codkaasi uu isaga yahay, balse khubaro garanaysa ninkaasi ayaa sheegtay in codka uu u muuqdo midkii Baqdaadi.
Albaqdaadi ayaa Muslimiinta ugu baaqay iney u soo haajiraan dhulka Khalaafadu maamusho ee Suuriya iyo Ciraaq.
Bishii Maarso ayaa la sheegay in uu dhaawac xoog leh soo gaaray ninkaasi. Balse hadalkiisan ayaa waxa uu meesha ka saarayaa wararkii sheegayay in uu malaha geeriyooday.
Qofka cajadalan soo duubay ayaa waxa uu soo xiganayaa aayado quraan ah, waxa uuna isku dayayaa in muslimiinta dunida uu ku qanciyo in ay kooxdiisa ku soo biiraan.
Arrinta ugu muhiimsan waxa ay tahay in uu khudbadda ku xusay duqeynta uu Sucuudigu horkacyo ee lagu hayo dalkaasi Yemen, taasoo ka dhigan in cajaladan la duubay 7 usbuuc ee la soo dhaafay.
13-kii bishaan May, duqeyn diyaaradeed ayaa gudaha Ciraaq lagu dilay Amiirka labaad ee Daacish, Abdul Rahman Mustafa Mohammed, oo ku magac dheeraa “Abu Alaa al-Afri” sida uu xaqiijiyey Gen Tahsin Ibrahim oo ah afhayeen u hadlay wasaraadda difaaca Ciraaq.
Somali iyo Sudan ku dhintay doon ku qallibantay xeebaha dalka Masar